လှေ, ရေကူးခြင်းနှင့်ရေအားကစား | Holmbygden.se
အဆိုပါHolmsjönန်းကျင်တော်တော်များများသောနေရာများအတွက်သာယာသော sommarbad များအတွက်အများအပြားဒဏ်ငွေသဲကမ်းခြေများမှာ. အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်Västbynနှင့်Sandnäsetဖြစ်ပါသည်.
Sandnäsetမှာဂျက် skis ငှားဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်, နှင့်အခြားသောလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုး.
boating ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်Holmsjönဧရိယာ၏အကြီးဆုံးရေအိုင်ဖြစ်ပါတယ်, အကြောင်းကိုသုံး Mil ရှည်လျား 39 စတုရန်းကီလိုမီတာဈဧရိယာ. အိုင်ရေနှင်းလျှောစီးသို့မဟုတ်ရေပြင်ဘုတ်စီးခြင်းမှာကျယ်ပြန့်လှည့်များအတွက်ကောင်းစွာသင့်တော်ပါတယ်. အတော်များများကနေထိုင်သူများနှင့်နွေရာသီအိမ်တွင်းဧည့်သည်များကဒီနွေရာသီကသူတို့လှေကိုဖွင့်ဖို့ရွေးချယ်.
Holmes ခရိုင်၏ရေပိုင်နက်အတွင်း ငါးမြေပုံကိုကြည့်ရှုပါနှင့် Holmes ငါးဖမ်းအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ ဒီမှာ.
တစ်ဦးကနူးတစ်ဦးသည်ဖြည်းဖြည်းစီးများအတွက်ခံစားချက်အတွက် (ကနေဒါ) မည်သည့်ရေချောင်း. ထိုအခါÖsterströmမှာငှားဖို့ကနူးရှိပါတယ်. ကြည့်ရန်နှုန်းထားများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်.
အိမ်နီးချင်းအိုင် Leringen နှင့်အတူHolmsjönပါဝါစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကြီးမားတဲ့ရေလှောင်ကန်ဖွဲ့စည်းနှင့်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ Leringsforsens နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် (.pdf အတွင်းရေစီးဆင်းမှု၏ပုံကြမ်းကဒီမှာ).
နွေရာသီနှင့်ပတ်သက်ပြီး၏ Holmes ပင်လယ်ပြင်ရေအဆင့်ပါ 201 မီတာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်နှင့်အောက်အကြောင်းကိုမှဆောင်းရာသီမှာလျှော့ချ 197 m.ö.h.
ထဲမှာရှိသကဲ့သို့အပေါငျးတို့သရေကန်များလှိုင်းတံပိုးပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ရေခဲပေါ်ထွက်ကိုသိရန်အသုံးဝင်သောဖြစ်အံ့သောငှါမဆိုခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိပါတယ်. အောက်တွင်သင်တစ်ဦးHolmsjön၏မြေပုံနှင့်၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်တွေ့နိုင်ပါသည်, နှင့်သင့် GPS စနစ်အတွက်သုံးစွဲဖို့မြေပုံအပုဒ်ကို download လုပ်ပါ, eller စမတ်ဖုန်း navigationsutrustning.
(သငျသညျအောက်ကမြေပုံကြည့်ရှုမနေပါနဲ့, သင်သည်သင်၏ browser ၏အဝါရောင်ချွတ်ထိပ်တန်း / အောက်ခြေပေါ်မှာ right ကလစ်နှိပ်ဖို့လိုအပ်နှင့် select လုပ်နိုင်တယ် “Show ကိုအကြောင်းအရာပိတ်ဆို့” သို့မဟုတ် “ခွင့်ပြု”.)
ဖြစ် မြင်ကွင်းအပြည့်ပင်လယ်ဇယား သို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ် Google Maps တွင်မြေပုံ (မျိုးစုံစာမျက်နှာများ).
သင့်ရဲ့ GPS တည်နေရာကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ဖုန်းကို Google Maps ကိုသုံးပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံဖော်ကြည့်ပါ.
1. ဂျီပီအက်စ်ကိုဖွင့်မည်:en ဈ din-ကားတစ်စီးစမတ်ဖုန်း (iphone / အန်းဒရွိုက်).
2. သင့်မိုဘိုင်း browser မှာအထက်ပါလိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ.
3. ဒါကြောင့်တစ်ဦး box ကိုဖွင့်လာလိုလျှင် “အပြီးအစီးအရေးယူသုံးပြီး”, ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, “Maps ကို”.
ယခုတွင်သင်သည် Holmes ရေကန်အခြေခံတွေ့နိုင်ပါသည်, shoreline နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်သင်၏အနေအထား.
အမျိုးမျိုးသောပုံစံများအတွက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ဖိုင်တွေ GPS စနစ်အဘို့အ Download:ဖြစ်. အမြင့်နှိပ်ပါ, “ပစ်မှတ် Save As ကို…”.
ဂျီပီအက်စ်ဖလှယ်ရေး – Holmsjons_grund_(120912).gpx (0,7ကို MB)
MapSource – Holmsjons_grund_(120912).gdb (0,1 ကို MB)
Google Earth – Holmsjons_grund_(120912).KML (0,2ကို MB)
Google Earth – Holmsjons_grund_(via_internet).KML (0,1ကို MB) အွန်လိုင်းမြေပုံ Reading.
မြေပုံပေါ်တွင် ပို. နှင့်လမ်းကြောင်းမြေပုံ
Holmes ရေကန်အခြေခံတဲ့ဂျီပီအက်စ်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည် (s.k. “လမ်း”) သောရေကန်ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောခိုင်ခိုင်လုံလုံနှင့် shoreline သွင်ပြင်လက္ခဏာများ. အဆိုပါလမ်းကြောင်း GPS စနစ်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းကိုဖုန်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်ကျောက်ဆောင်သို့မဟုတ်ပါးလွှာရေခဲကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကြောင့်လှေနှင့်ဆောင်းရာသီတွင်ရှောင်ရှားရန်နွေရာသီကိုအသုံးပြု. အဆိုပါလိုင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ခရီးစဉ်ဘေးကင်းပါလိမ့်မည်! ငါးမျှားနေစဉ်သင်သည်နောက်တဖန်အိုင်ပေါ်မှာအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသုံးနိုင်တယ်.
Holmsjönစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့်ဆောင်းရာသီတွင်ရေများများကျဆင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်. Kart သီချင်းသစ်အိုင်ရဲ့ shorelines ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလတစ်လျှောက်တွင်စနိုးဆိုင်ကယ်စီးနေသည်ဖွငျ့ထားပြီး. ထိုအချိန်တွင် (mars 2008) အိုင်အကြောင်းကိုလျှော့ချခဲ့သည်4ရေကိုနွေရာသီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မီတာ. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရှောင်ရှားဖို့လမ်းကြောင်းအပေါ်သွားလာလျှင်တိုင်းပြည်ကောင်းတစ်ဦးရဲ့ margin ရှိပါတယ်. ထူးမြတ်သောအရောင်အအုတ်မြစ်၏အချို့သင်တန်းအိုင်အပြည့်အဝမိုဃ်းလင်းသောအခါတသေးသောရှောက်သွားဖို့လုံလောက်တဲ့အပြည့်အဝနက်ရှိုင်းအပေါ်နိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါလမ်းကြောင်း Patrik Wikholm အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. Niklas Wikholm ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ထုတ်ဝေ. အမှားများမှဘာသာရပ်.